कुसे विशेष Archive
जसको जीवनको बृतान्तले शरिरमा उमार्छ काँडा
जबसम्म ईच्छा र साहस हुन्छ तबसम्म एक मुट्ठी सासले पनि माया नै गर्दो रहेछ। आफ्ना व्यक्तिगत जीवन र महत्वाकांक्षा भन्दा निकै माथी उठेर सामाजिक स्वार्थ र रुपान्तरणको यात्रामा समर्पण भएको जिन्दगी उत्तिकै प्यारो हुँदो रहेछ। देश
जनताको दुखसंग सुख साट्ने वीर वहादुरको त्यो भीष्म प्रतिज्ञा
कर्णाली सरकार यतिबेला सरकारको आयतन बढाउने तिर उन्मुख छ । प्रमुख सत्ता सारथीका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र आफ्ना अपुरा प्रतिनिधि पठाउने योजनामा छ । मन्त्रीको लागि शुभ साइत पर्खेका डोल्पाका माननीय वीर वहादुर शाही यतिबेला चर्चामा
जो उज्यालो दिन निस्किएका थिए, आफै बादल बनेर निक्लीए
हाे जिन्दगी एउटा उपहारमा आएको बित्त हो । जसलाई सार्थक काममा लगानी गरिनुपर्छ । तर जब सार्थक उदेश्यको लागि सार्थक काममा लगानी गरिदा पनि जिन्दगीको प्रतिफल निरर्थक निस्कन्छ, त्यहाँ भने लगानिकर्ताको लागि हिनता बोध र स्पष्ट
भनिन्छ विगत केवल विगत मात्रै हो बित्यो सकियो। भुत भुत नै हो थियो सकियो। तर कतिपय विगतनै भविष्यका प्रेरक हुन्छन। विगत आफैमा गलत हुनसक्छ तर उसले भविष्यको गतिलो मार्गदर्शन पनि गर्न सक्छ। कुहिरो भित्र हराएको हिजोले
सुन्दर मुस्कानको पर्दा पछाडि अनगिन्ती पिडाको राज बोकेकी ‘रीना’
जिवनको प्रत्यक पल भित्र भिन्न कथा अनि प्रत्यक कथा भित्र आफ्नै व्यथा बोकेर हिडेकी छिन उनी। हुनत हिड्नलाई पनि उनको निम्ति खासै फराकिलो दायरा पनि छैन। सबैतिरका मार्गहरु बन्द भइसकेका छ्न। तरपनी जिवन एउटा बाध्यात्मक यात्रा
जनयुद्धको तितो इतिहास बोकेर वर्तमानमा उभिएकी ‘बविता’
संघर्ष र प्रेरणाका साक्षात उदाहरण धिरूको घत लाग्दो बृतान्त
जीवन त एक गतिशीलता र सक्रिय संघर्षको बहाव हो। यद्यपि यो जिवनमा संघर्ष नै भएन भने यसको अर्थ के हुन्छ र ? सुखका दिनहरु राम्रा अवश्य हुन्छन तर दीर्घकालीन जिन्दगीको पदयात्रामा मार्गदर्शक बन्न सक्दैनन् । अनि
प्रेरणा र बहादुरीका मिसायल रुपेश तामाङ : एक साहसिक योद्धाको घत लाग्दो कथा
हुने हार दैव नटार, यदि जिन्दगीमा केही हुनुनै छ भने त्यो भएर नै छोड्छ । चाहे त्यो राम्रो होस या नराम्रो । जिन्दगीको मोड जतिबेला जस्तो पनि आइदिन सक्छ चाहे हामिले चाहुँ या नचाहुँ । तर
फुलमाया : जिन्दगी सोचेजस्तो हुँदैन तर जस्तो हुन्छ त्यसैलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ
खुशी कुनै परिस्थितिले दिदैन यो त आफैबाट बन्नुपर्छ। कमजोरी त चन्द्रमामा पनि छ तर उ निराश कहिल्यै हुँदैन। अरे यहाँ दुखी भएर बस्ने हो भने कस्लाई छैन दुःख हरेक मान्छेमा छ दुःख। कसैले देखाउछन त कसैले
जिन्दगी यस्तै होलाकी नहोला ? भारी बोकेर फेरिएको त्यो चोला !
नाम : रबिन्द्र न्यौपाने जन्म : पलाँता १ खाँडा कालिकोट संघर्ष : पलाँतादेखि भारतको देहरादुन हुदै सुर्खेतसम्मा उमेर : ३१ बर्ष पेशा : युवा उद्यमी (ब्यवसाय) रहर : अब त समाज सेवा गर्ने भारतको देहराधुन नेपालीहरुले